स’न्तुष्ट नभएको भन्दै एक रा’तको लागी श्रीमान सा’ट्ने को हुन् यी महिला ! – Life Nepali
स’न्तुष्ट नभएको भन्दै एक रा’तको लागी श्रीमान सा’ट्ने को हुन् यी महिला !
त्यसपछि केयले आफ्नो श्रीमान रोर्बटलाई छिमेकी महिला रिटासँग नमान्दा नमान्दै सा’टिन् । केय रिटाको श्रीमान टेरीसँग बस्न थालिन् । त्यसपछि उनीहरु आफ्नो जो’डीसँग घुम्न जाने निर्नय गरे । तर एक जोडी घुम्न जादाँ अर्को जो’डीले दुवै जोडीको ब’च्चाको हेरचाह गर्ने सल्लाह गरे । तर अर्को रो’चक कुरा यी दुई महिलाले २ हप्ताको विदाको क्रममा आफ्नो श्री’मान २ रा’तको लागी सा’टे ।
जब २ दिन सकियो । त्यसपछि ती २ दुवै जो’डी घर फर्किए । तर घरमा आउदाँ ती जोडीहरुको सबथोक ब’दलियो । घर आएपछि केयको श्रीमान् रोर्बट र रिटाले आफु छ्ट्टै ४ सन्तानहरुको साथमा बस्ने बताए । यो सुनेपछि केयको पनि होस् ह’वास उ’ड्यो । किनभने २ रा’तको लागी सा’टेको श्रीमान सधैको लागी अ’कैको भयो ।
त्यसपछि केयले पनि टेरीसँग जीवन बिताउने निर्नय गरिन् ।तर छोराछोरीको बारेमा ठुलो वि’वाद भयो । केयसँग उनकी कान्छी छोरी रशेल र टेरीकी कान्छी छोरी बस्ने भए । त्यसपछि उनीहरु आ आफनै जो’डीसँग टाढा गएर बसे । उता रोर्बट र रिटा एकदम रमाइलोसँग मिलेर बस्न थाले । तर उता केय र टेरीको स’म्बन्धमा भने ठुलो भु’इचालो आ’यो । किनभने टेरी निकै रि’साहा थिए ।
जसले गर्दा बे’लाबेलमा झ’गडा भइरहन्थ्यो । यो स’म्बन्ध ७ वर्षपछि टु’ट्यो । त्यसपछि केयले छोरी रशेलसँग ए’क्लै जिन्दगी बिताउन सुरु गरिन् । यो घ’टनापछि उनको आफ्ना छोरा र रशेलको आफ्ना पितासँग कहिल्यै भेट भएन् । जुन सानो गल्तीले उनी आफुले ख’नेको खा’ल्डोमा आफै परिन् ,पूरा जिन्दगी नै ब’र्बाद भयो। उनी अहिले ४८ वर्षकी भएकी छिन् । जुन घ’टनाको केयले प’श्चताप गदै ‘द हस्बेण्ड नेक्स्ट डोर’ नाम गरेको किताबमा छापेकी छिन् ।
Previous स’न्तुष्ट नभएको भन्दै एक रा’तको लागी श्रीमान सा’ट्ने को हुन् यी महिला !
Next यी चार राशी भएका पुरुषले कहिल्यै दिदैनन प्रेमिका लाई धो’का !!